Shiinaha FOTON C10 / C12 EV warshad iyo soosaarayaasha | Foton
Markaad doorato basaska Foton, waxaad dooraneysaa gaadiidka dadweynaha ee caqliga badan. Subaxa hore ilaa fiidki, bas kasta oo Foton ah wuxuu wadi karaa adeegyo buuxa, jid walba. Waxay ku siineysaa dabacsanaan kama dambays ah habka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Guud ahaan Cabbirka 12000 * 2550 * 3100/3250 (Wixii C12)
Gawaarida Gawaarida 5900
Culayska Curb 12.7 / 12.9T
Awoodda Rakaabka / Fadhiga 76-82 / 23-43
Albaabka Rakaabka 2 albaabbada garabka labalaab ah
Qaab dhismeedka jirka Monocoque Gelitaan hoose / Dabaq hoose
Faa'iidooyinka muuqda sida waxtarka, keydinta tamarta, raaxada iyo badbaadada, waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa horumarinta gaadiidka dadweynaha magaalooyinka horumaray iyo dhiirrigelinta gawaarida bey'ada u habboon, iyadoo dabooleysa baahida hawl ee hawlwadeennada kala duwan.
Taageerayaasha Elektaroonigga ah
Baska magaalada ee Foton C10 / C12 EV waa mid gebi ahaanba la isku halleyn karo, amaan ah, wax soo saar faa'iido leh, kana jawaabaya baahida jirta iyo tan mustaqbalka ee gaadiidka magaalada. Laga soo bilaabo naqshadeynta illaa wajiga qorshaynta, waxaan xooga saarnay had iyo jeer sidii lagu gaari lahaa waxtarka ugu badan ee suurtogalka ah ee tamarta, kordhinta baaxada baska iyo hagaajinta dhamaadka maareynta nolosha.
Mashiinka isku dhafan ee magnetka ah
Ku qalabeysan yahay nidaam koontaroolida gawaarida iswada leh, oo leh howl ganacsi sanado badan, heerka imaanshaha ayaa ka sareeya 98%.
Qaab dhismeedka wadista tooska ah ee korantada
5% ka sarreeya alaabooyinka la midka ah saamiga isticmaalka tamarta;
Jidh fudud, 5% ka fudud alaabooyinka la midka ah.
Noocyo badan oo lacag bixin ah
Fursad iyo habeyn habeyn ah, iyadoo la ogaanayo isku-dhafnaan isku dhafan oo suuqyo kala duwan ah si loo daboolo baahiyaha hawlgalka ee kala duwan.
Nidaamka qaboojinta heerkulka-xakamaynta
Ogaanshaha qawaaniinta xawaaraha caqliga ku saleysan baahida shucaaca si loo gaaro waxtarka sare iyo keydinta tamarta (oo lagu hagaajiyay 5%)
Qaybta mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa alaarmiga heerkulka ee la socodka waqtiga-dhabta ah iyo aaladda is-deminta si loo ogaado kormeerka waqtiga-dhabta ah; taarikada birta ah ee loo yaqaan 'firewall steel' ayaa loo adeegsadaa si loo hubiyo amniga darawalnimada iyo rakaabka; qalabka ololka u adkaysta iyo qalabka A-fasalka u adkaysta ololka oo leh waxqabad wanaagsan oo nabadgelyo leh ayaa loo isticmaalaa agagaarka isha kuleylkaaga.
Foton waxay siisaa hawl wadeenada qorshaynta laynka la hagaajiyay iyada oo la tixraacayo qaababka hawlgalka baabuurta, sida Megalopolis, Magaalo dhexdhexaad ah, Magaalo dhexdhexaad yar.
Taageero farsamo: si wada jir ah u tixgalinta ilaha howlwadeenada iyo baahidooda tixgelinta, isku xirka kharashaadka kaabayaasha iyo xaaladaha alaabooyin kala duwan si macaamiisha looga caawiyo dhismaha qorshooyinka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee macquul ah Maareynta fog: nidaamka maaraynta masaafada dheer - iBlue, ka caawinta wadayaasha inay ogaadaan xakamaynta caqliga iyo taageerida hawl wadeenada si ay u gaaraan hawlgal caqli badan Tababarka la talinta: ka caawinta hawlwadeenada inay ku xalliyaan dhibaatooyinka hawlgalka dhabta ah iyada oo loo marayo hawlgalka muujinta gaadhiga, tababarka shaqaalaha, hagida hawlgalka kooxda laga bilaabo iibsiga alaabada illaa hawlgalka dambe, iwm
20190402171127_product_35_226056629 Nidaamka maamulka guddiga-iTink, oo leh wax soo saarka ilaalinta deegaanka ee caqliga badan, taageerada howlgalka caqliga iyo adeegga bini-aadamnimada, abuurista maareyn isku dhafan oo loogu talagalay dadka, gawaarida iyo waddooyinka.